महिलाहरुले यी ४ कारण पटक्कै मन पराउदैनन् क/ण्डम - दैनिक नेपाल न्युज
से’/क्स जहिले पनि सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि से’/क्स गर्नेले त विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । असुरक्षित से’/क्सका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा क’/ण्ड/मको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो’/नै सबैभन्दा सजिलो साधनको रुपमा पनि परिचित छ । सुरक्षित से/-क्सका लागि क’ण्ड/म भरपर्दो अ-स्थायी सा-धान मानिन्छ । जसले विभिन्न सं/क्र/म-णबाट समेत जोगाउन मद्धत गर्छ । तर, धेरै महिलाहरुलाई क’/ण्ड-मको प्रयोग मनपर्दैन । यसका मुख्य चार कारणहरु रहेका छन् ।
१.ए/लर्जी- धेरैजसो महिलाहरुका अनुसार क’ण्ड/म प्रयोग गरेर से’/क्स गर्दा महिलाहरुलाई ए/लर्जी हुनेगर्छ । उनीहरु क’ण्ड/मका कारण आफ्नो प्रा’-इ/भेट पा/र्टमा पो-‘ल्ने गरेको बताउने गर्छन् । २. चर/म आ/नन्दको कमी- केही युवतीहरुका अनुसार क’ण्ड/म लगाएर से’/क्स ग-र्दा च/म आन/न्द मिल्दैन । यसै कारण उनीहरुलाई से’/क्स पा’र्टन/रले क’/ण्ड/म लगाएको मन-पर्दैन । उनीहरुलाई ‘स्कि-‘न टु स्कि’न टच’ मनपर्छ ।
३. बा-सना- केही युवतीहरुले क-ण्ड/मको बास-नालाई लिएर आफ्नो पा’र्टन-रसँग वि’-वा/द गर्ने गरेको पाइएको छ । उनीहरुलाई क’ण्ड-मको बा-सना मनपर्दैन । ४. फु/’ट्ने ड’र- से’/क्सको समयमा महिलाहरुलाई क-ण्ड/म फु’/ट्ने ड/’रले निकै स-ता’उने गर्छ । यसका कारण उनीहरुले चाहेजस्तो से’/क्स आ–नन्द लिन सक्दैनन् । जे सुकै भएपनि प्रत्येक जोडीले सुरक्षित यौ’/नस/म्पर्क गुर्नपर्छ । विभिन्न समस्या एवम रो’गहरुबाट सं-क्र’मण हुनुभन्दा सुरक्षित यौ/न आ-नन्द लिनु नै हाम्रा लागि फलदायी हुन्छ ।
रोल्पाको एक सामुदायिक विद्यालयले टोल शिक्षामार्फत पठनपाठन शुरु गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाम लिवाङमा रहेको बालकल्याण नमूना माविले असारको अन्तिम सातादेखि टोल शिक्षामार्फत पठनपाठन थालनी गरेको हो । विद्यार्थीमा पढ्ने बानी घट्दै गएको भन्दै अभिभावकले पटकपटक वैकल्पिक विधिवाट पठनपाठन गर्न गरेको आग्रह वमोजिम तल्ला कक्षामा टोल शिक्षा शुरु गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष महेश न्यौपानेले बताउनुभयो ।
टोल शिक्षामा बढीमा २५ जना विद्यार्थीलाई एउटा कक्षामा राख्ने गरिएको छ । कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर सावधानी अपनाउँदै टोल शिक्षा शुरु गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ । कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै बन्द भएको विद्यालय खुल्ने सुनिश्चित नहुँदा अभिभावकको माग बमोजिम टोलटोलमा पठनपाठन शुरु गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक मधुसुदन पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । विद्यालय बन्द रहेपनि पढाइ बन्द नहोस् भनेर यो विधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको प्रधानाध्यपक पोख्रेलले बताउनुभयो । कक्षा नर्सरीदेखि तीनसम्म टोल शिक्षा सुरु गरेको विद्यालयले जनाएको छ ।
चालु शैक्षिक सत्रमा नर्सरीदेखि कक्षा तीनसम्म भर्ना भएका ४२३ मध्ये ३५८ विद्यार्थी टोल शिक्षामा समावेश भएको विद्यालयका शिक्षक मुकेश हमालले बताउनुभयो । टोल शिक्षामा सहभागि हुनेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएकाले भर्ना भएको तर टोल शिक्षामा नआएका विद्यार्थीलाई पनि सहभागी गराउने पहल भइरहेको शिक्षक हमालको भनाइ छ । लामो समय विद्यालय बन्द भएका कारण उनीहरु सदरमुकाम छोडेर घर गएका हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विद्यालयले थालनी गरेको टोल शिक्षाले विद्यार्थी पढाइप्रति आशावादी देखिएको अभिभावकको भनाइ छ । लामो समय विद्यालय बन्द रहँदा मोवाइल र टिभी बढी हेर्ने बालबालिका टोलमै गएर पढ्न पाउँदा सिकाइ प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुने अभिभावक मनवहादुर खत्रीले बताउनुभयो । “विद्यार्थीमा पढ्ने लेख्ने वानी विर्सदै गएको देख्दा दुःख लागेको थियो, टोल शिक्षाले उनीहरुलाई व्यस्त बनाएको छ”, खत्रीले भन्नुभयो ।
सो विद्यालयले गरेको राम्रो अभ्यास जिल्लाका अन्य विद्यालयले पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । बालकल्याण माविले शुरु गरेको टोल शिक्षालाई आफूहरुले पनि अनुशरण गरेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय रोल्पा नगरपालिका–२ का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगवहादुर वलीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका अन्य सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयले पनि टोल शिक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
जिल्लाको पहिलो नमूना माविको रुपमा रहेको सो विद्यालयमा करीब दुई हजार ६०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, वाणिज्य, मानविकि र शिक्षाशास्त्रमा अध्यापन हुँदै आएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् अन्तरगत सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा प्री डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कक्षासमेत सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
सुनचाँदी व्यवसायीसँग सामूहिक तस्बीर खिचाउँदै प्रहरी
झापा, ४ असोजः कोडिभ– १९ को सङ्क्रमण दर जिल्लामा घट्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढेको कारण सङ्क्रमण घट्दै गएको स्वास्थ्य कार्यालय झापाका [...]
काभ्रेपलाञ्चोक, ४ असोजः यहाँका चार स्थानीय तह कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । एक नगर र तीन गाउँपालिका कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका हुन् भने पछिल्लो दुई दिनदेखि जिल्लामा थप सङ्क्रमण देखिएको छैन [...]
सुदूरपश्चिममा ह्वातै घट्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणदर
बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज चार जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । गएको २४ घण्टामा प्रदेशभर एन्टिजेन विधिबाट ८१६ जनाको नमूना परीक्षण गर्दा चार जनामा मात्रै सङ्क्रमण पुष्टि [...]
गुप्ताङ्गमा लागुऔषध लुकाएर ल्याउँदै गरेका युवक गड्डाचौकीबाट पक्राउ
कञ्चनपुर, ३ असोज: भारतीय निकटवर्ती बजार वनवसाबाट लागुऔषध ल्याउँदै गरेका युवकलाई सशस्त्र प्रहरीले आज भीमदत्त नगरपालिका–११ गड्डाचौकीबाट पक्राउ गरेको छ । गुप्ताङ्गमा लागुऔषध लुकाएर ल्याउँदै गरेका दार्चुला जिल्ला महाकाली नगरपालिका–४ [...]
खोटाङ, ३ असोजः खोटाङमा आठ जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । एक्कासी टाउको दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, आलस्य हुनेजस्ता लक्षण देखिएपछि उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल आएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ [...]
म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’ समस्या, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?
गलेश्वर, ३ असोजः म्याग्दीका शहरी क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगमा ‘सेतो पुतलीको झुस’को समस्या देखिएको छ । घरघरका भित्तादेखि सार्वजनिक संस्था, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बिजुलीका खम्बालगायत ठाउँमा ‘झुस’ [...]